China Formamide vagadziri uye vanotengesa | Kuzvipira
Molecular Kurema: 45.04
CAS Nhamba: 75-12-7
isina kuchena mvura, isina kuona kusachena
Yakajeka, isina ruvara mvura uye ine ammonia-senge-isina kusimba hwema.mp2.55 ° C, bp210-212 ° C (kuora kwakasarudzika kutanga pa180 ° C), flash point 154 ° C, chiyero 1.1334 (20 ° C). Iva soluble mumvura uye doro, zvishoma soluble mu benzene uye ether, nezvimwewo, hygroscopic
Formamide ndicho chinhu chekugadzira mishonga, spicery uye dyestuffs.Iyo inoshandiswa seyakagadziriswa mukugadzira fiber kutenderera, kugadzira kwepurasitiki uye lignin ink kugadzirwa nezvimwe, sepepa inorapa mumiririri, coagulation accelerator mumafuta kutsva nekuvaka indasitiri, se carburant mukurasa indasitiri. , glue softener uye se polar solvent mu organic synthesis.
220kg pa200L dhiramu repurasitiki kana madhiramu esimbi (mukati mekupfeka) Yakanyatsovharwa kudzivirira kubva mukubuda uye nekubata mvura Yakachengetwa munzvimbo dzinotonhorera, dzekubuda uye dzakaoma, kure nemoto uye sosi inopisa.
Yakareba nhoroondo uye kugadzikana kugadzirwa
Ikozvino kugona kwedu kwekugadzira kuchakwanisa kusvika 25000MT pagore, tinogona kuronga iko kutumira kwauri munguva.
1.Strict mhando kudzora system
Tine ISO Chitupa, isu tine yakasimba yemhando yekudzora system, ese edu ehunyanzvi ane hunyanzvi, iwo ari akaomarara pane mhando kutonga.
Tisati taraira, tinogona kutumira sampuli yekuyedzwa kwako. Isu tinoona kuti mhando yacho yakafanana neakawanda huwandu.SGS kana mumwe munhu wechitatu zvinogamuchirwa.
2. Kukurumidza kutumira
Tine kubatana kwakanaka nevazhinji vanoendesa kumberi kuno; tinogona kutumira chigadzirwa kwauri kana iwe uchinge wasimbisa iyo odha.
3. Nguva iri nani yekubhadhara
Tinogona kuumba inonzwisisika nzira dzekubhadhara maererano nemhando dzakasiyana dzevatengi. Mamwe mazwi ekubhadhara anogona kupihwa.
• Ita makemikari munguva yehupenyu. Tine makore anopfuura makumi mapfumbamwe ane ruzivo muChemical Maindasitiri nekutengeserana.
• Nyanzvi & timu yehunyanzvi yekuona mhando. Chero dambudziko remhando yezvigadzirwa rinogona kuchinjwa kana kudzoserwa.
• Mu-yakadzika chemistry ruzivo uye zviitiko zvekupa yakakwira mhando makomputa masevhisi.
• Yakasimba kudzora kwemhando. Tisati tatumira, tinogona kupa yemahara sampuro bvunzo.
• Yega-inogadzira main raw zvigadzirwa, Saka mutengo une Makwikwi mukana.
• Kukurumidza kutumira nemutero wekutakura une mukurumbira, Kurongedza nepallet sechikumbiro chakakosha chomutengi. Cargoes pikicha yakapihwa isati uye mushure mekurodha mumidziyo yevatengi mareferenzi.
• Professional kurodha.Tine timu imwechete inotarisa kuisa zvinhu. Tichaongorora mudziyo, mapakeji usati warodha.
Uye tichagadzira yakazara Kuisa Mushumo kumutengi wedu pane imwe neimwe yekutumirwa.
• Yakanakisa sevhisi mushure mekutumirwa neemail uye kufona.
Pashure: Cyclopropyl methyl ketone
Zvadaro: 1,2-diaminobenzene CAS: 95-54-5
Yakakwirira Yakachena Formamide
Yakakwira Hunhu 4 Methylmorpholine Nemutengo Wakanyanya